Fiainana klioba :: Misedra olana ry Thomas Fontaine • AoRaha
Mandalo fahasahiranana ara-bola ny klioban’ny FC Lorient izay ilalaovan’ilay vodilaharana malagasy mandrafitra ny ekipam-pirenena amin’ny baolina kitra, Thomas Fontaine noho ny afitsoky ny valanaretina « Coronavirus ». Mitantara ny fiainan’ny kliobany sy ny fomba fiatrehany ny fihiboana ity mpilalao ity.
Manararaotra mikarakara ny fianakaviany sy ny zanany vavy izy nandritra izay fotoana izay. Tsy adinony ny manao fana-tanjahantena antasakadiny isan’ andro. “Tena mafy ho anay mpilalao izao valan’ aretina «Coronavirus» izao. Vokatry ny fiatoan’ny fifaninanana no voatery nandray fanapahan-kevitra ny filohan’ny klioban’ny FC Lorient, ka mampifandimby anay mpilalao rehetra amin’ny fanapahan-karama. Nanaiky an’ io fanapahan-kevitra io izahay rehetra satria henjana ny fandanian’ ny klioba nefa tsy misy ny fidiram-bola avy amin’ny fisian’ny lalao atrehanay », araka ny fanazavan’ i Thomas Fontaine .
Hatreto anefa dia manana herijika ny hiakatra ho any amin’ny Ligy 1 io ekipan’ ny Lorient FC io, satria mitana ny laharana voalohany vonjimaika ry zareo. Niverina ho tompon-toerana hatrany i Thomas Fontaine nandritra ny andro enina nisesy, noho ny ezaka sy ny zava-bitany nahafa-po ny mpanazatra.
« Mikasika ny « Coronavirus », izay mipaka any Madagasikara, dia manentana ny mpiray tanindrazana rehetra aho amin’ny fanarahana ny toromarika, ary indrindra hihidy an-trano, mba ho fitsinjovana ny tsy hiparitahan’io tsimok’aretina « Covid 19 » io. Mitondra am-bavaka ho anareo aho, ary maniry mafy ny hahaizantsika hiaraka hiady an’izany aretina izany », hoy i Thomas Fontaine, namarana ny resany.
Basket-ball :: Mety hiverina amin’ny septambra ny fifanintsanana